Tag: bulie | Martech Zone
UpSnap na-enye netwọkụ mgbasa ozi mgbasa ozi na-enye ihe karịrị otu ijeri echiche kwa ọnwa. Site na mmekọrịta ha na ụfọdụ saịtị kachasị, ha na-enwe ike igosipụta mgbasa ozi na netwọkụ ndị ọzọ na ọnụego nke ihe karịrị 100 ijeri echiche kwa ọnwa. UpSnap na-enyere gị aka ịchụ ndị ahịa ndị nọ nso azụmahịa gị. Ozugbo mkpọsa gị dị ndụ, UpSnap ga-egosipụta mgbasa ozi mkpanaka gị na ndị ahịa n'ime okirikiri kilomita ise. Ebumnuche na-agbasawanye n'elu